सीताको जन्मभूमिबारे भारतीय च्यानलको अफवाहः माता सीता विहारमा जन्मिएको रे ? - Mahendranagar Post
Home अन्य अध्यात्म सीताको जन्मभूमिबारे भारतीय च्यानलको अफवाहः माता सीता विहारमा जन्मिएको रे ?
सीताको जन्मभूमिबारे भारतीय च्यानलको अफवाहः माता सीता विहारमा जन्मिएको रे ?
काठमाडौं-राम–जानकीको प्रसंगलाई भारतको एउटा समाचार च्यानल ‘जी न्यूज’ले तोडमोड गरेको छ ।जानकी अर्थात सीताको जन्मस्थान हाल नेपालको जनकपुरमा पर्ने तथ्यलाई च्यानल ‘जी न्यूज’ले तोडमोड पार्ने प्रयास गरेको हो।
भारतको समाचार च्यानल ‘जी न्यूज’मा सीताको जन्म विहार राज्यको सीतामणिमा भएको दाबी गरिएको छ। बिहार राज्यको स्थापना दिवसको अवसरमा जी न्यूजको डीएनए कार्यक्रममा सीता जन्मभूमिलाई लिएर गलत व्याख्या गरिएको छ।
कहिले विवाद नभएको सीताको जन्मभूमिलाई लिएर भारतीयहरुले सांस्कृतिक र धार्मिक मान्यतामाथि नै हस्तक्षेप पुनः दोहोर्याएका छन्। भारतको विहार राज्यमा पर्ने सीतामणिमा सीताको जन्म भएको गलत व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
Previous articleबजेट अभावले धनगढी विमानस्थलको स्तरवृद्धि कार्य अलपत्र
Next articleहप्ता दिन नपुग्दै उपसचिवकाे सरूवा, बडीमालिकाका नगर प्रमुख बडुवाल भन्छन, ‘अर्को उपसचिव नआएसम्म रमना दिन्न’